Abavelisi beewallet-iChina Wallet Factory, abaXhasi
TIGERNU umnini wepasipoti yokwenene
I-T-S8005 uyilo lwethu lokugcina ipasipoti, inokuba sisipaji nayo. Ukukhethwa kwesikhumba sokwenyani esikwinqanaba eliphezulu kwenza le wallet ukuba ibe sisiphelo esiphakamileyo kunye nesodolo. Igcwele ngokwaneleyo ipaspoti yakho, ikhadi lebhanki, i-ID, itikiti lomoya, ikhadi leSIM. Umsebenzi weRFID unokugcina lonke ikhadi lakho likhuselekile kwaye ukhusele ulwazi lwakho lomntu siqu.
Izinto eziphathekayo ziyisikhumba sangempela, umgangatho ophezulu kunye nokuhlala ixesha elide. Ikwanombhalo we-Tigernu logo njengoyilo kunye nophawu lophawu.
Isipaji ngasinye sipakishwe ngebhokisi entle, esenza ukhetho olufanelekileyo njengesipho sabathandekayo bakho. Kukhetho olufanelekileyo ekusebenziseni kwakho kwemihla ngemihla okanye kukhenketho.
I-TIGERNU yokuqala yokubamba ikhadi
Ngumnini wekhadi elisebenzayo leRFID, hayi kuphela kwimfashini kodwa nakwizinga eliphezulu. Yenziwe ngesikhumba sokwenyani, somelele kakhulu kwaye sikhululekile ukusebenzisa.Ineemakhadi ezili-10 zokugcina onke amakhadi akho kunye nepokotho enye evaliweyo yokugcina imali kunye neengqekembe zakho. Isebenza njengesipaji ngaxeshanye.
Umnini wekhadi liqabane elilungileyo kubomi bakho bemihla ngemihla. Ubunzima bokukhanya, umzimba omncinci, kulula ukuwuthwala. Umsebenzi we-RFID wokulwa nobusela kukunika ukhuseleko ngakumbi ebomini bakho. Umgangatho wayo ophakamileyo nawo uba yinto ebonakalayo kuwo.
Iimveliso zeTigernu ziya kuhlala ziyanelisa.
Iifayili ezimbini zefayili zeTIGERNU
Izinto eziphathekayo: I-tiger nu fashion wallet use splashproof & scratch oxford enganyangekiyo njengezinto eziphambili, imfashini, ixesha elide kunye ne-eco-friendly.
Umthamo: Ubungakanani yi-10.5 * 1.5 * 19.5cm, enamakhadi ali-12, ekulula ukuwaphatha amakhadi akho kunye nokuhlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla. Ikwalingana ne-6inch iselfowuni. Indlela yokuvalwa kukucofa iqhosha, ukubonelela ngokhuseleko olongezelelekileyo kubomi bakho bemihla ngemihla.
Liqabane elifanelekileyo lokuhamba, uyilo lwefashoni kunye nobunzima bokukhanya kumadoda, abasetyhini, abafundi. Ungayigcina engxoweni yakho okanye uphathe ngesandla sakho ukuze kube lula. Ukhetho olufanelekileyo kubomi bemihla ngemihla, ukuhamba, ukuya ezivenkileni, esikolweni, emsebenzini njalo njalo.
TIGERNU uyilo lokuqala
Isixhobo: I-TIGERNU yokuqala yoyilo lwesipaji sokusetyenziswa okungafunekiyo kunye nokukrwela izinto ezinganyangekiyo njengezinto eziphambili, imfashini, ixesha elide kunye ne-eco-friendly.
Umthamo: Ubungakanani yi-11.5 * 1.5 * 21.5cm, enamakhadi ama-8, kulula ukuphatha amakhadi akho kunye nokuhlangabezana neemfuno zakho zemihla ngemihla.Ipokotho enye ye-zipper yeemali kunye nezinto zexabiso, izahluli ezibini zamanqaku. Ikwalingana neselfowuni eyi-6inch.
Liqabane elifanelekileyo lokuhamba, uyilo lwefashoni yamadoda, amabhinqa, abafundi. Khetha TIGERNU, khetha ubomi obungcono.